Dongguan Walley Machinery Technology Co., Ltd. rakagadzwa muna June 2002, yakazvimirira qianrunshun michini mhiri kwemakungwa dhipatimendi. Inowanikwa muChangping Town, Dongguan City, Guangdong Province, China. Iyo yepamusoro-tech kambani ine yakasimba yakazara kugona mune chaiyo michina zvikamu kugadzira, yechigadziko dhizaini, kusimudzira uye kugadzira, uye rediyeta dhizaini uye kusimudzira. Maitiro ayo makuru ekugadzira anosanganisira CNC chaiyo machining, CNC lathe kugadzira, uye Stamping inogadzira, riveting, gungano, nezvimwewo zvigadzirwa zvinosanganisira: zvekurapa zvishandiso zvikamu kugadzirisa, kutaurirana michina zvikamu kugadzira, mota zvikamu kugadzira, kwemauto zvigadzirwa kugadzirisa, chinongedzo zvikamu kugadzira, radiator module kugadzirisa uye mimwe minda.
Nebasa remhando yepamusoro uye mukurumbira wakanaka, Wally anokura zvakatsiga muCCC chaiyo yekugadzira indasitiri. Izvo hazvirambe zvichingovandudza mune zvisiri-zvakaenzana zvikamu zvekugadzirisa, asi zvakare zvinoita fambiro mberi huru mune chaiyo module kugadzirisa, radiator chigadzirwa kugadzira, kunyatso kugadzirisa fekitori, nezvimwe, zvichipa kukosha-kwakawedzerwa masevhisi kune vatengi kupedzisa imwechete-yekumisa kutenga.